Lalao 9 karazana Pinturillo maimaim-poana ho an'ny Android | Androidsis
DaniPlay | | Lalao Android
Ny fanagadrana roa volana mahery tao an-trano dia nanokana fotoana bebe kokoa amin'ny tontolon'ny fianakaviana, ankoatry ny fanokanana fotoana be dia be amin'ny fialamboly. Sehatra iray nitombo tamin'izany fotoana izany dia ny lalao finday, indrindra ireo izay handany ora sy lalao maro.
Ny karazana fiaraha-miasa dia ny fiakarana toerana, laharana ho iray amin'ny voalohany ilay Pinturillo fanta-daza, lohateny izay maminavina ireo teny amin'ny alàlan'ny sary mba hanome isa. Amin'izao fotoana izao dia misy safidy maro hafa, ka azo atao izany mitadiava lalao karazana Pinturillo ao amin'ny Play Store.
1 Manaova sary kilasika
2 Nanontaniana 2
5 Manaova sary sy eritrereto Multiplayer
6 Scribblery: Multiplayer an-tserasera
7 Saripika mahafinaritra
8 Ataovy ny fifandonana
9 Manaova sary ankehitriny
Manaova sary kilasika
Izy io dia safidy iray ho an'i Pinturillo ao amin'ny fizarana roa ao aminy nandritra ny fotoana ela. Ny Draw Something Classic dia lalao ara-tsosialy izay anaovanao sary sy maminavina ireo sary solontenan'ny mpilalao. Tonga lafatra izy io raha te hilalao miaraka amin'ny tontolo manodidina anao akaiky indrindra ianao, ary koa miaraka amin'ireo namanao ary na dia amin'ireo olona avy amin'ny vazan-tany hafa aza.
Ao amin'ny Draw Something Classic dia manana ny paompy ho fanampiana ianao satria raha tsy tafiditra ianao dia maminavina ny teny iray, azon'ny mpilalao rehetra ampiasaina. Izany dia ampiany ho afaka manao sary amin'ny mainty mandritra ny androm-piainany sy ny lokon'ny loko rehetra hanatsarana ny sary.
Mifandimby ireo mekanika lalao, azonao atao ny mihaika ny namanao ary mijanona eo alohan'izy ireo, raha mbola maranitra ianao mba hahazoana ilay teny marina. Ny lohateny dia havaozina matetika, noho izany dia tsara ny hanaovana azy isaky ny tonga ny iray amin'izy ireo manana ny kinova farany.
Lalao izay nanomboka nipoitra tamin'ny famoahana kinova voalohany tokony ho 8 taona lasa izay (natomboka tamin'ny 2013). Amin'ity lohateny malaza ity dia tsy maintsy asehonao ny fahalalanao mifototra amin'ny fanontaniana, miaraka amin'ny olona an'arivony maro samy hafa sy tonga lafatra hahafinaritra amin'ny olona rehetra misoratra anarana hilalao.
Vantany vao milalao ianao dia hanangona ireo endri-tsoratra isan-karazany misy, manatsara sy mahazo loka mandritra ny lalao tsirairay. Afaka mandany fotoana mahafinaritra ianao, manatsara ny sokajy samihafa izay mifantoka amin'ny lalao izay anisan'ireo nampidina indrindra tamin'ny sokajy misy azy.
Ny duel dia amin'ny fotoana tena izy, hihaika anao izy ireo ary manana fotoana ampy hamaliana fotsiny ianao raha te hoheverina ho manan-kery, noho izany dia tsy tokony hatory ianao. Ireo satro-boninahitra dia hahatonga anao hametraka ny tenanao eo an-tampon'ity zavatra tsy misy dikany ity izay mihoatra ny 10 tapitrisa fampidinana ary 4,4 amin'ny isa 5 ny fanombatombanana anao.
Lalao Pinturillo io saingy navaozina tanteraka, farafaharatsiny izany no izy rehefa manokatra azy ianao ary manomboka milalao azy. Ny Gartic.io dia hamela anao hanoritra tsirairay avy, mila maminavina izay voasoratra amin'io fotoana io, izay mahatonga azy io ho vinavina sy sary mety, ary afaka ihany koa izy io.
Ny Gartic.io dia mamela anao hamorona efitrano misy mpilalao hatramin'ny 50, noho izany ny fanasana dia amin'ny alàlan'ny rohy iray, izay tsy maintsy hamafisin'ny tsirairay avy eo amin'ny tarika. Samy hafa be ireo lohahevitra, ka mahatonga azy io ho solony zava-dehibe raha mitady kilalao mitovy amin'i Pinturillo ianao.
Lalao video maimaimpoana io, mampiala voly ary misy lafy tsara, dia iray amin'ireo manadio manatsara ny Pinturillo, zavatra azo atao noho ny mekanika ao aminy. Gartic.io dia azo lalaovina amin'ny alàlan'ny pejiny ihany koa raha tsy misy fampidinana mialoha, mety amin'ny telefaona, solosaina, takelaka ary karazana fitaovana hafa.
Gartic.io - Misintona, Teboka, WIN
Izy io dia lalao finday misy telo ao anatin'ny iray, miaraka amin'ny safidy voalohany manana ny divuja y, ilay tadiavin'ny mpampiasa rehetra raha te-hilalao karazana Pinturillo izy nefa manana fiainana bebe kokoa. Afaka milalao kilalao amin'ny namana ny mpampiasa Na mikaroha mpifanandrina amin'ny Internet haingana sy mora.
Amin'ny lalao faharoa, mila mandray anjara ny olona amin'ny alàlan'ny fanoratana ny teny, ny fanaovana sary ary, hamaranana, hamenoana ny fahaizan'ny nataon'ny mpanohitra anao. Efa ao amin'ny fahatelo ianao dia mila manamboatra saryAmin'ity tranga ity dia mitaky traikefa kely amin'ny fanaovana sary, ilay iray izay manakaiky ny sary no handresy.
Anisan'ireo mampiavaka azy, Miavaka i LetsDrawit amin'ny famoronana efitrano misy lohahevitra, ankoatry ny afaka miresaka amin'ireo olona ao anatiny, ankoatry ny mahasakana ny olona manelingelina. Amin'izao fotoana izao dia izy io no misy misintona vitsy, fa io no iray amin'ireo mahafinaritra indrindra.
-LetsDrawIt- lalao fanaovana sary marobe
Manaova sary sy eritrereto Multiplayer
Draw and Guess Multiplayer dia lalao fifaninanana afaka milalao miaraka amin'izay olona eo amin'ny tontolon'ny fianakaviana sy amin'ny namana samihafa. Ho fanampin'izany, ny lalao dia manome safidy hifandraisana amin'ireo olona na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, afaka milalao amin'ny olona avy any Japon, Sina, Etazonia, amin'ireo faritany hafa.
Amin'ity lalao ity dia ho azonao atao ny mampiseho ireo sanganasa kanto izay ampiasaina hampisehoana, hanampy izany hanan-kery hizara atiny amin'ireo olona rehetra lalaovinao. Lalao karazana Pinturillo io, na dia mampatsiahy ny Pictionary aza izany, lohateny iray hafa izay nahatonga fahatsapana tamin'ny voalohany.
Ny mpilalao an-tserasera dia mety ho mpilalao 2 ka hatramin'ny 6, afaka manasa ireo olona tadiavinao ianao ary ny zavatra tsara indrindra dia ny manana fotoana mahafinaritra miaraka amin'izy rehetra. Ny naoty an'ity lalao ity dia 3,3 amin'ny isa 5, iray amin'ireo naoty ratsy indrindra, saingy manana fampidinana 1 tapitrisa.
Developer: Lalao Time Plus Q
Scribblery: Multiplayer an-tserasera
Ity dia lalao misy fitoviana lehibe amin'ireo voalaza rehetra, karazana Pinturillo milalao miaraka amin'ny fianakavianao, ny namanao ary ny olonao amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Tena interface tsara ny interface, ohatra, ho mora ny manao sary, ny zavatra tsara indrindra dia ny afaka manao ilay hafahafa haingana satria mora tohina.
Ao amin'ny Scribblery: Multiplayer an-tserasera dia afaka mamorona efitrano malalaka sy tsy miankina amin'ny fanjakana ianao, tonga lafatra ny voalohany raha te hilalao amin'ireo olona misy ao ianao. Ny tsy miankina dia mety raha miditra ny olona tianao fantatra ihany, noho izany dia mila fanasana ianao na hampiasa kaody.
Ny iray amin'ireo tanjaka dia ny filalaovana offline, Ka azonao atao ny manao azy manokana sy milalao mifanohitra amin'ny alàlan'ny fandefasana telefaona amin'izy ireo. Scribblery: Online Multiplayer dia manana fanamarihana 4,2 amin'ny isa 5, io no iray amin'ireo sarobidy indrindra amin'ny fivarotana noho ny fitovizany amin'i Pinturillo.
Scribblery: P Multiplayer amin'ny Internet
Ao amin'ny Happy Draw dia tsy ilaina ny mifandray Internet Raha hilalao dia hifandimby ny lalao, voalohany ho an'ilay mila mandoko izany, ny hafa kosa hiezaka haminavina. Ny CPU dia hampiharihary ny CPU, ka anjaranao ny mandika azy ary ny hafa hahitsy.
Zara raha manana fotoana manokana ianao hamitana ny sary tsirairay, maika fa ataovy izany mba hahafahan'ny mpanohitra anao manome isa isaky ny boriboriny. Misy ambaratonga mihoatra ny 300, miampy ny iray amin'ireo sanganasa Azo zaraina izy ireo, ka raha te-hamonjy azy ianao dia tsindrio izy ireo dia izay.
Ny zavatra tsara momba ny fampiharana dia misy izany amin'ny fiteny 10 samihafa, anisan'izany ny Espaniôla, iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao. Happy Draw dia nahazo naoty 3,1 avy amin'ny isa 5, na eo aza izany dia nahatratra 500.000 ny fisintomana ary manantena ny hitombo hatrany, manantena ny ho zavatra hafa ankoatry ny fanoloana an'i Pinturillo.
Sarin-tsambatra mahafinaritra - Lalao sary maminany AI
Ataovy ny fifandonana
Iray amin'ireo lalao izay nanao ny dingana hahatrarana ny tampony ary noho izany dia manao izany amin'ny fitazonana ny tonic an'ny lohateny hafa izay nahomby. Tena mitovy amin'ny Pictionary izany lalao izany dia mifototra amin'ny zava-dehibe, dia ny misarika ny mpilalao sisa rehetra hilalao.
Ny filokana an-tserasera dia mahatonga azy io ho be mpampiasa, satria izay no nahatonga azy io ho iray amin'ireo ankafizin'ny maro izay nitady safidy tsara ho an'i Pinturillo. Milalaova teny iray, ary maminavina ny hafa miaraka amin'ny valiny maro, fa amin'ny fotoana voafaritry ny CPU.
Draw Clash koa ankoatr'izay manampy hery hanafika ny fahavalo ary ianao dia tsy maintsy hampahalemy azy ireo mandra-pandringanao azy, ka anjaranao no mamono azy tsirairay avy. Ny fiarovana no fanafihana tsara indrindra, noho izany mora ny miomana sy manafika azy rehefa tena ilaina izany. Teny mihoatra ny 300 hosarihana.
Sary fifandonana - Lalao sary maminany AI
Manaova sary ankehitriny
Fenoy sary maro araka izay azonao atao ao anatin'ny iray minitra farafahakeliny ao anatin'ny 60 segondra izay no fotoana ambony indrindra haharenesana ny teny tsirairay. Ny fihodinana tsirairay dia misy fanontaniana 5 eo ho eo, miantso ny AI raha mifanaraka amin'ny lohahevitra ny sary ary farany, jereo raha mahavita ny top 5 ianao.
Anisan'ireo zava-baovao ao aminy ny fananana tarehin-tsoratra manokana 9, loko penina 9, bonus isan'andro ho an'ireo mpampiasa VIP ary teny 350 eo ho eo hamaha. Iray amin'ireo lalao nandresy mafy io, anisan'ny nisongadina tamin'ny lisitra na dia nahazo marika 3,7 aza.
Hiseho eo amin'ny boatin'ny tsirairay ny isaMihaino ny sary tsirairay ary mamaha raha hitanao tsara izany, raha tsy izany dia mitovitovy amin'ny hafa mihitsy. Ny Draw Now dia iray amin'ireo lohateny azo alaina maimaim-poana sy mety amin'ny fitaovana Android, na telefaona na takelaka izany.
Manaova sary izao - Lalao sary maminany AI
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » 9 lalao Pinturillo maimaim-poana ho an'ny Android
Nomo, ny fomba mora sy haingana indrindra hitantanana ny orinasanao